प्राथमिक रंग, निश्चित गाइड। कुन हुन्? | क्रिएटिव अनलाइन
प्राथमिक र colorsहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
रंगहरू हाम्रो संसारको अपरिहार्य अंश हुन्। हामीले छुने, देख्ने वा महसुस गर्ने प्रत्येक चीजको रंग हुन्छ। थपको रूपमा, हामीले हाई स्कूलको बखत विभिन्न प्रकारका रंगहरू प्रयोग गरेर छविहरूमा र to्ग थप्न सिकेका छौं। प्राथमिक रंगहरू - पहिले आदिम रंगहरूको रूपमा चिनिन्थ्यो - एक आदर्श ढाँचा हो, केहि प्रकाश फ्रिक्वेन्सीहरू र उनीहरूको हस्तक्षेपको उपस्थितिमा मानव आँखामा रिसेप्टर कोषहरूको जैविक प्रतिक्रियामा आधारित।
यो दिमागमा, प्रश्न सधैं प्राथमिक रंग के हो भनेर हुन्छ? कुनले यसलाई बनाउँछ? के त्यहाँ प्राथमिक रंगहरूको मिश्रण छ? विभिन्न प्रकारका प्राथमिक विद्यालयहरू? हामी खैरो रंग कसरी पाउन सक्छौं? हामी यी प्रश्नहरूको उत्तर निश्चित गाईडमा दिदैछौं ताकि तपाईं अरू केही देख्नुहुनेछैन। उही लेखमा यी सबै शंकाहरू थप्दै
त्यसोभए तपाईंले नबिर्सनुहोस्, यो लेख आफ्ना बुकमार्कमा राख्न नबिर्सनुहोस्, त्यसैले तपाईं एकैचोटि सबै कुरा सम्झन सक्नुहुन्छ।
1 प्राथमिक रंगहरू के हुन्?
2 प्राथमिक रंग मिश्रण
3 प्राथमिक रंग चक्र
4 प्राथमिक रंगका साथ खैरो कसरी बनाउने
4.1 RYB फेरि देखा पर्छ
4.2 सुन्तला र निलो
4.3 अन्तमा यसलाई हरियो र रातो संग प्राप्त गर्नुहोस्
प्राथमिक रंगहरू के हुन्?
कुनै पनि कम्प्युटर वैज्ञानिक, डिजाईनर, इलिमिनेटरले तपाईंलाई भन्दछ कि RGB वा CMYK र दुबै मान्य मानिन्छ। तर उनीहरूले हामीलाई हेर्ने तरिकामा असहमत हुन्छन्।
प्राथमिक र color्ग, पहिले पहिल्यै चिनिन्थ्यो primnavo एक हो जुन अन्य र mix्ग मिश्रण गरेर प्राप्त गर्न सकिदैन। यो हामी कसरी आँखाका माध्यमबाट देख्छौंबाट आउँदछ। र यसैले दुबै प्रकाश र pigmentation फरक छन्। त्यसैले यस बारे मा धेरै शंका हो। वास्तवमा, यी दुई सम्भावनाहरू जान्नु अघि जुन क्षेत्रहरू तिनीहरू प्रतिबिम्बित छन् विभाजित, RYB (रातो, पहेंलो र निलो) ज्ञात थियो- हो, मुख्य छविमा जस्तै। हामी गलत थिएनौं।
यो प्राथमिक र color्गको पहिलो अवधारणा थियो, १ the औं शताब्दीमा र जुनले हालको सीएमवाईकेलाई मार्ग दियो। र यो सिंथेटिक्स र कम्प्युटरको माध्यमबाट टेक्नोलोजीको प्रगति द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको थियो। त्यसकारण अब यो प्राथमिक र colors्गको परिवारमा मानिदैन।
प्रकाशमा प्राथमिक रंगहरू आरजीबी हुन् (रातो, हरियो र निलो) र pigmentation को लागी प्राथमिक रंगहरु CMYK हो (स्यान, म्याजेन्टा, पहेंलो र कालो)
प्राथमिक रंग मिश्रण
पिग्मेन्टेशनका अनुसार हामी भन्न सक्दछौं कि प्राथमिक रंगहरू सीएमवाईके हो, जसको अनुवाद स्यान, म्याजेन्टा, पहेंलो र कालो हुनेछ। यी रंगहरूलाई मिक्स गर्दा निम्न माध्यमिक र colorsहरूमा परिणामहरू:
म्याजेन्टा + पहेंलो = सुन्तला
सियान + पहेंलो = हरियो
स्यान + म्याजेन्टा = वायोलेट
सियान + म्याजेन्टा + पहेंलो = कालो
प्रकाश द्वारा प्रतिबिम्बित प्राथमिक रंगहरूको बारेमा, हामी एक्रोनिम RGB दिन्छौं जुन अनुवाद गरिएको रातो, हरियो र निलो हुनेछ। तिनीहरू निम्न रंगहरूको माध्यमिक र colorsहरूको मिश्रणमा झर्न सक्छन्।
हरियो + निलो = सियान
रातो + निलो = म्याजेन्टा
रातो + हरियो = पहेंलो
रातो + निलो + हरियो = सेतो
हामी अवलोकन गर्न सक्दछौं, CMYK का तीन प्राथमिक रंगहरूको मिलनको भिन्नता RGB सँग यो एक कालो र अन्त्य सेतोमा अन्त्य हुन्छ। हास्यास्पद कुरा यो हो कि दुई आदर्श मोडेलका अनुसार दुबै र color्ग योजनाहरूको स्पष्ट पत्राचार छ: आरजीबी मोडेलको माध्यमिक रंगहरू सीएमवाइकेको प्राथमिक र colors्ग हुन्, र यसको विपरित।
कमसेकम सिद्धान्तमा, किनकि व्यवहारमा यसलाई शाब्दिक रूपमा लिन सकिदैन। मानवको जैविक संरचनाको कारणले विभिन्न र differentहरू सिर्जना गर्दछ र यो प्रकाशको गुणस्तर होईन। अन्तत: रंग अवस्थित हुँदैन किनकि यो हुन्छ, यो हाम्रो धारणा हो।
प्राथमिक रंग चक्र
यस्तो पनि भनिन्छ रंगीय सर्कल यो तिनीहरूको टोनलिटी अनुसार अर्डरमा रंगहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा तरिका हो। त्यो हो, प्राथमिक र colorsहरू एक अर्कोसँग राखेर तिनीहरूलाई मिक्स गर्नाले बिभिन्न रesहरू (माध्यमिक र तृतीयक र )हरू) निम्त्याउँदछ। आज यो वर्णन गर्न सजिलो छ। किनभने कुनै पनि प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमा फोटो सम्पादन कार्यक्रम हुन्छ। हामी फोटोशपको बारेमा कुरा गर्दैछौं तर यो अरू कुनै हुन सक्छ।
र p्ग प्यालेटमा क्लिक गरेर हामी देख्छौं कि यो रंगीन वृत्त कसरी हुन्छ। पहिले यो देख्न अझ गाह्रो भएको थियो, न्यूटनले प्राथमिक र माध्यमिक र colorsहरूको अस्तित्व खोज्यो र गोथेले १ 1810१० मा पहिलो र color्ग पा wheel्गको आविष्कार गर्‍यो। यो चक्र धेरै रूपहरूमा परिणत भएको छ, यो पूर्ण रूपमा गोलाकार बन्द नभएसम्म र डोडेग्रामहरू नभएसम्म। १les1867 Bla मा चार्ल्स ब्लान्कले उनीहरूलाई सिर्जना गर्‍यो र तिनीहरू धेरै भिन्नै देख्न सकिन्छ।
प्राथमिक रंगका साथ खैरो कसरी बनाउने
चित्रकारी सुरू गर्ने सबैका लागि यो सँधै गाह्रो काम हो। म दोहोर्याउँछु कि गुगलमा हेक्स वा RGB कोड फेला पार्न र फोटोशपमा लेख्न यो सजिलो छ। तर रंगहरूको प्राकृतिक मिश्रणमा यो सजिलो छैन र यो टोनलिटी प्राप्त गर्दछ।
ब्राउन को लागी एक रंग छैन विचार गरीरहेको छ, किनकि यो प्रकाशको स्पेक्ट्रमको अंश होइन। यो र colors्गहरूको संयोजन हो, जुन विभिन्न तरिकामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईंले कुन ब्राउनको टोन प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ, किनकि त्यस टोनमा निर्भर गर्दै तपाईंले एउटा मार्ग वा अर्को पालना गर्नुपर्नेछ।
RYB फेरि देखा पर्छ
त्यसकारण हामीले प्राथमिक रंगहरूको यो संयोजनको बारेमा पहिले कुरा गरिसकेका छौं। जे होस् आज यो अप्रचलित देखिन्छ, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि यससँग के क्षमताहरू छन्। यस अवस्थामा, नीलो, पहेंलो र रातो समान भागहरूमा र सेतोको स्पर्श। यो मिश्रणले तपाईंलाई खैरो परिणाम दिनेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि यो तपाईले खोजिरहनु भएको वास्तविक छाया होइन भने, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ पहेंलो मिश्रण गर्नुहोस् ताकि हल्का छाया बाहिर आउँदछ, र जति रातो वा निलो गाढा यसको बाहिर आउँदछ.
सुन्तला र निलो
रंग सुन्तला, जस्तो कि हामीले पहिले वर्णन गर्यौं, प्राथमिक र color होईन। यसको कुनै पनि सम्भावनाहरूमा (CMYK, RYB, RGB)। यसैले हामी यसलाई निम्नलिखित तरिकाले पहिला प्राप्त गर्न गइरहेका छौं:
हामी रातो - धेरै रातो - र १०% पहेलो प्रयोग गर्छौं इच्छित सुन्तला लाई प्राप्त गर्नका लागि। हामी यो रंगलाई मिक्स गर्नेछौं, अब हो,%% निलोसँग। जुन हामी पारम्परिक चकलेट ब्राउन पाउनेछौं। यदि तपाईंलाई यसको गाढा चाहिएमा, नीलो र हल्काको प्रतिशत बढाउनुहोस्, सुन्तलाको अधिक प्रतिशत। आवश्यकतामा निर्भर गर्दै।
अन्तमा यसलाई हरियो र रातो संग प्राप्त गर्नुहोस्
यो खैरो अधिक रातो रंगको हुनेछ, सुन्तलाको साथ पहिले जस्तो, हरियो रंग प्राथमिकता पनि छैन। प्राप्त गर्नका लागि बराबर भागहरू, पहेंलो र निलो मिलाउनुहोस्। एकपटक मिश्रण समाप्त भएपछि, रातो अलि अलि थप्नुहोस्। त्यसोभए तपाईले चाहेको टोंनिलिटीमा खैरो र towardsको र the्गको विकास देख्नुहुनेछ। यो अधिक नबनाउन सावधान हुनुहोस्, नत्र तपाईं चाहेको टोन उफ्रिनुहुनेछ। पछाडि जानका लागि, हरियो थप्नुहोस्, तर हुनसक्छ यो राम्रोसँग मेल खाँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्राथमिक र colorsहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
कोलाजको X-ray यसको लुकेको साइड हेर्न